Mushure mekutadza kwe iyo Wii U, uye munguva yeiyo Ultra-HD mitambo yekutamba kubva PS4 Pro uye Xbox One X, vamwe vaive vatanga kufunga kuti mazuva ekunyaradza na 'Nintendo'kurohwa mbichana mbichana mbichana'
Asi ma naysayers aive asina kunaka, seiyo Nintendo switchch yakaratidza nguva nenguva kubva mukuvambwa kwayo - ikozvino ne inotakurika-chete Shandura Lite imwe nzira yakatangwa zvakare, ichiwedzera kusimbisa budiriro - kutenda kwete kwekufunga zvakare izvo imba uye inotakurika console inogona kureva, asi zvakare nekuda kwemimwe mitambo yakanaka iripo ani mutambo wemitambo.
Mitambo yakanakisa yeNintendo Shandura munhu wese anofanira kunge ane yake
Iyo ichiri yakakamurwa maonero, zvakadaro. Iko hakuna kuwanda kweyechitatu-bato mazita kana maapuro sezvakawanikwa pane mamwe mapuratifomu. Kuvimbika kwemifananidzo kuri kumashure kwezvakabvira kumwewo. Asi izvo hazvimiswe kupakura zvikepe zvevanhu kubva mukutenga iyo console. Uye nechikonzero chakanaka: ine kunyatsojeka uye inoita zvinhu nenzira dzakasiyana. Zvinogona kunge zvirizvo ari kunyaradza kutenga kunze kweiyo matatu hari ikozvino.
Kufunga zvekare imba yekunyaradza
Console, 6.2-inch 720p skrini uye maviri Joy-Con controllers akaverengerwa
Tamba paTV kana tamba-pa-iyo (Joy-Cons clipera pane skrini yezviratidzo zvinotakurika)
Grey, Neon uye rakasarudzika edition Joy-Con apedza inowanikwa
Pane kusava nechokwadi kwakawanda kwekuti Nintendo Shandura yakangwara mikana mitambo console. Iyo inosanganisira 6.2-inch tablet-yakafanana mudziyo, iine 720p yekubata-bata kumeso, vatauri ve stereo uye kurovera kwakakomberedza kumashure, saka inogona kushandiswa-isina maoko pamwe nekufamba. Ye, iwe unogona kutamba Mario pane guru skrini kumba, kana pane iyo console's skrini paunenge uchienda kubasa mangwanani. Iyo ndiyo yakakosha poindi yemusiyano.
Iwo ma mini mini controlers, anonzi Joy-Cons, clip chero parutivi rwechidiki screen kana uchitamba uri wega. Kana ichinge yabatwa iyi ndoitawo maitiro avanodaira Zvinogona zvakare kubviswa uye kushandiswa somunhu oga, mini gamepads yemaviri-mutambi mitambo kana kupfuura, iyo yekunyaradza iyo pachayo yakagara patafura kuburikidza nekukwevera kana iwe uri kutamba kure. Kana ivo vanogona kuveurwa rumwe rutivi rweJoy-Con Grip kuti iite yakakura, inonyanya kuzivikanwa mutambo wekutonga.
Super Mario Odyssey ongorora: Nintendo zvipikiri iyo
Uku kuita zvinhu zvakasiyana-siyana ndicho chinhu chikuru pane chinonzi switch. Haisi pfungwa itsva yekuti piritsi rekushandisa rinogona kubhurwa muTV kuitira chiitiko chekutamba pamba, asi Nintendo inoita kuti ive nyore kuseka. Saka nekudaro inonzwa yekutanga. Ingo rongedza iyo inotakurika console mune yepurasitiki dzimba, iyo iri maviri magetsi uye inobatana neTV kuburikidza HDMI, uye yako mutambo kana Nintendo homecreen inoonekwa pane yakakura skrini pane.
Kana chabviswa, Chinja chinosimudza chiitiko chemufananidzo kuzere HD HD 1080p (kubva pa720p pane icho chinhu pachako). Haisi iyo mitambo yese inowana iyo - The Legend pamusoro Zelda: Kufuridzira Wild inochengetedza resolution ye 900p muTV mode, semuenzaniso - asi kana vaita kutendeseka kwavo kutendeseka kunokwidziridzwa, kusvika kune yeavhareji Xbox One kana PS4 mutambo (Zvakanaka, saka hapana PS4 Pro or Xbox One X, asi isu hatinei chaizvo kupihwa mhando yemazita ekupa).
Kana kutamba kweTV kusiri kwako uye iwe uchida kungotakurika ipapo chete the switch the Lite, imwe yese yekupa console, ingave sarudzo iri nani kwauri - iyo inoshaya doko uye saka inogona kungoridzwa uri kuenda.
Ndekupi kwekutenga Nintendo Chinja? Chinja Lite stock ichiri kuwanikwa
Yakawanda sei Nintendo Shandura mitambo uye kutora?
Nintendo eShop inowanikwa yekudhaunirodha
Mitambo inouya pamabharadhi zvakare
Yakaomeserwa yechitatu-bato apps (hapana Netflix, semuenzaniso)
Mitambo inouya mu cartridge chimiro, saka haufanirwe kumirira ivo kuti vatore pasi kunze kwekunge paine software chigamba. Ingo pop imwe chete mune inodiwa slot pamusoro peiyo switch uye inoonekwa pane menyu skrini. Nekudaro, pane iyo Nintendo eStore, iwe ungafanira here kutora pasi pemitambo yakazara pane iyo switch yeWitch microSD kadhi kuchengetedza panzvimbo.
Nintendo Shandura kuchengetedza izere? Iyo yakanakisa microSD kadhi inopa kutenga uye kudzivirira kurodha kuora mwoyo
Cartridges idiki mumuviri, idiki kunyange kupfuura 3DS mitambo, saka iwe unofanirwa kungwarira kuti urege kurasikirwa navo. Izvo zvine basa rekufambisa, zvakadaro, uye mareibhurari akawedzerwa anogona kuchengetwa zviri nyore. Chimwe chinhu chinonakidza ndechekuti ivo zvakare vanorapwa neasina-chepfu asi inorwadzisa kemikari yekudzivirira vana vadiki kubva pakuvadya. Kwete, chaizvo - vanovira zvakaipa.
Iyo switch switch yemenyu system iri nyore uye yakachena, ine hombe, diki zvigunwe zvekuisa yakamisikidzwa kana kuisirwa mitambo uye zvidiki menyu icons kuti uwane iyo eShop, Garari nekudyidzana munharaunda, shandura marongero, tarisa Joy-Con mabhatiri mazinga, nezvimwewo Kune zvakare "Nhau" chikamu chinopa zvazvino ruzivo uye ruzivo kubva kuNintendo pachayo. Izvi azere tutorials uye setup info kana iwe kutanga bhoti kumusoro.
Nintendo Chinja matipi & manomano: Maitiro ekuwana zvakanyanya kubva kune yako nyowani koni
Iyo eShop yakave yakajairika kupfuura iyo yekutanga iyo console yakatanga, ichipa zvikamu zvekuburitswa kwemitambo, mitambo inouya munguva pfupi, uye yekukodha kodhi yekudzoreredzwa. Kune zvakare vaNintendo yako pachako kunyoreswa online basa, Nintendo chinja Online, inova inofanirwa-kuve nemitambo yekutamba yemitambo yakawanda. Iko kune yemahara kwemazuva manomwe kuyedzwa, saka inyore yakabhadharwa: $ 3.49 / € 3.99 / $ 3.99 pamwedzi (£ 6.99 / € 7.99 / $ 7.99 pakota; $ 17.99 / € 19.99 / $ 19.99 pagore); kune zvakare Nhengo Yemhuri pa- $ 31.49 / € 34.99 / ¢ 34.99 pagore iyo inobvumira mhuri account account (kusvika masere maakaundi akakwana).
Nintendo Chinja Online nhengo, mutengo, mitambo uye nezvimwe
Panyaya yemapulogalamu, zvakadaro, Nintendo ari kuderera zvakanyanya mudhipatimendi iri. Pakusvitsa, pakanga pasina kana chinhu. Sezvo pane zvimwe zvirimo, seYouTube, asi hapana mavhidhiyo ekutsikisa mavhidhiyo (kunze kwaHulu muUS chete). Kuve nekunyatso chunky inotakurika skrini muhombodo yako uye kusakwanisa chero chinhu chekutarisa Netflix, Amazon Video, BBC iPlayer kana chero imwe yemavhidhiyo masevhisi inoita seakaoma kutaura. Kugona kwakadaro kwaizowedzera mirwi kuwedzera kune avo vangangoita vatengi venhema. Tinofungidzira kuti iri kuuya asi zvimwe zvirongwa hazvisi kongiri ikozvino.
Ehe, Shanduko inoda kutamba mitambo nemazvo uye izvo zvinofanirwa kuve zvinonyanya kutariswa naNintendo, asi magajeti anoitirwa kurerutsa hupenyu hwedu, kwete kuita kuti ave akaomarara, kana mabhegi edu anorema. Takazviwana tave kutora iPad neiyo Chinja pakufamba kwenguva refu, izvo zvisina kumira zvakanaka.
Iyo Nintendo Chinja inouya nemutambo here?
32GB pane-bhodhi chengetedzo (microSD slot yekuwedzera)
Hapana mutambo unosanganisirwa mubhokisi (1-2-Shandura iri $ 40)
Isu hatisi pakati pevanofunga kuti Shanduko inonyanya kudhura - huwandu hwemaawa ekutamba atakapiwa nendege apo iyo yekushanya-nhandaro mafaro yave iri yakaipa yaita kuti ikoshe - asi kwave paine vanoverengeka vemashure. Iyo yekunyaradza yakaderedzwa mune imwechete ballpark seiyo Xbox One uye Dreamcast 4 pavakatanga kusheedzera. Uye munyika ichiri kupora uye kubata nedambudziko rekushupika, Brexit naDonald Trump, izvo zvinoita sezvakanyanya pane zvaunowana mubhokisi.
Kutaurisa kumatunhu akadzika kunouya nemitengo yemitambo iri pamusoro. Mitambo yekutanga-bato yaNintendo yagara iri mutengo. Ivo havawanzo kuderedzwa nezvakawanda kungave, nemisoro yenhaka ichichengetedza yemutengo wepurefu kwemakore. Saka kutenga, uti, Zelda paunowedzera pamusoro pemutengo weti console inoita kuti zvese zviratidzike. Uye ngatizvitarisei, ndiwo mutambo mukuru unotsvakwa nemunhu wese. Zvakanaka, iyo uye Pokemon Ngatione. Ah, uye Animal Crossing. Chaizvoizvo, kune mirwi yemitambo inoshamisa, zvakaoma kusarudza yaunoda.
Isu tinokukurudzira iwe kuti utonhorere kune microSD kadhi zvakare, ine inosvika 64GB yekuchengetedza. Iyo switchch inouya iine chete 32GB pane bhodhi - huwandu hwakaenzana uchifunga iyo yedhijitari yekurodha yeZelda chete inotora inopfuura 13GB. Iyo hafu-inoshongedza microSD kadhi haizobhadhare mari yakawanda, pamwe ishoma kana iwe wakasunga chibvumirano - saka izvo zvinoda kuwedzera mubhadharo zvakare.
Nintendo Shandura kuchengetedza izere? Iyo yakanakisa microSD kadhi inopa
Zvinofadza, ndizvozvo. Iwe haudi chaizvo Pro Controller kana Joy-Con Kuchaja Grip. Yaimbova yakanaka inowanika, iine tsika yechinyakare yemutambo, asi iyo Joy-Con Grip inouya mubhokisi neiyo switch inopfuura inokwanisa. Inogona kutaridzika kunge kumeso kwechimbwa, asi inonzwa zvakanaka muruoko uye takaita maawa akawanda tichitamba mitambo nemumwe mushe.
Kuchaira Grip hakuna zvakunobatsira mune yedu maonero. Zvakawanda zvakataurwa isati yatanga nezvekusabatanidza kwayo mubhokisi, asi zvese zvinowedzera ndeye USB port saka unogona kubhadharisa yako Joy-Cons paunenge uchitamba, kuburikidza nekusungira waya pakati peGirip uye Chinjo dhiriji. Isu tinongo simbisa kuti isu tinopaza Joy-Cons kumashure pamativi eSystem unit patinozorora zuva rega rega uye izvo zvinoita basa racho zvaro kwazvo. Chokwadi, zvinoita kuti dzirambe dzakachena.
Iwe unoda here kutenga Nintendo Shandura zvishandiso? Pro Controller uye Joy-Con Kuchaja Grip yakatsanangurwa
Isu hatina kumbobvira tave nenyaya dzehupenyu hwebhatiri neJoy-Cons - chete kungoerekana kwekudonha kubva pakubatana kubva kuruboshwe controller side, izvo zvinogona kutsamwisa, asi zvakagadziriswa parutivi kuburikidza nesoftware update - saka uchifunga nezve kudhura kwaita Pro Kudzora uye kuchaja Grip ndizvo, izvo zvinouya senhau dzakanaka.
Cherekedza, zvisinei, iyo switch yacho pachayo inogona chete kutora maawa matatu kusvika mana emaawa ekutamba uchitamba mune yakagadziriswa ruoko isati yoda kubhadharwa zvakare. Takatora ndege refu-yekubhururuka uye tikawana kuti yakakwana, asi kunyangwe kune iyo kwatisina kurara - uye inoda kuuraya iyo inotevera mukuru mukuru kuZelda, kana kuwana iyo imwe nyeredzi muMario - chirevo chikuru ndeche ingounza iyo inokwenenzverwa simba paki mu tauro, sezvaungaita iwe weiyo smartphone. Jobho akazviita.
Zelda Breath yeChisiko ongororo: Epic RPG
Ndeipi yeNintendo switchch's resolution yepamusoro?
720p yakakura inotakurika resolution
1080p yakakwira TV-yakagadziriswa sarudzo
Nintendo akazo pinda munyika yeWakazara HD neiyo switch (ingori munguva yekuve kumashure kwekutenderera zvakare nekuda kwe4K) kana uchitamba pachiratidzo chikuru. Saka kana yabatwa, chiitiko cheChinjana chakanaka chaizvo senge chero mukwikwidzi. Hongu, akawanda Xbox One uye PS4 mitambo ine zvirinani kugadziriswa uye / kana chimiro-mareti kupfuura akawanda Shandura mazita, asi ndiko kutenda kune nguva uye ruzivo rwebudiriro. Nhamba dzinoverengeka dzeTurnch mazita ari 1080p60, kusanganisira Mario Kart 8 Deluxe.
Iyo 6.2-inch console's screen inokwanisa kusvika pa60Hz (60fps) pa720p saka inotaridzika zvikuru kana ichidyarwa yakajeka, yakatsiga gameplay. Isu tingadai takafarira zvishoma kusiyana uye zvinyorwa zvinogona kutaridzika zvishoma zvakanyanya kuti maziso edu akwegura dzimwe nguva, asi iyo-inopfuura-yakanaka-tsika mutambo wemitambo - zviri nani zvikuru kupfuura iyo skrini paWii U GamePad.
Audio idiki isinganzwisisike asi inonzwisisika uchifunga nezvevatauri vadiki. Kutaura chokwadi, vazhinji vachange vachishandisa mahedhifoni nenzira yakachengetedzwa nenzira, kunyange zvakadaro iwe unofanirwa kupa yako. Kerching!
Ah, uye isu zvirokwazvo tinopa zano kutenga kesi. Isu neimwe nzira takazeya chikamu chidiki chedhivha yedu switch, iyo isinga gadzirike nechero kudeedzera. Zvishongedze.
Ndeipi yakanakisa Nintendo Chinja mutambo?
Kwete kuti ndezve zvese nezvekugadziriswa. Zviri nyore kwazvo kuti zvisvike pasi neizvo. Kwete, iyo switch ndeye zvese nezvemitambo yayo yakasarudzika.
Yoshi Yakasikwa Nyika ongororo
Zvakanaka, saka mutambo unofanirwa kunge wauya mubhokisi. Iyo Wii yakauya neWiiSports, iyo Wii U Premium Edition neNintendo Land. Iyo switchch yaifanira kuve yaive 1-2 Shandura zvinosanganisirwa pazvinhu zvidiki kwazvo. Panzvimbo iyoyo, iyo bato ndeyekutenga kwakaparadzana, ichiita kuti iwedzere kuwanda kwemitambo-mini-mitambo yakangogadzirirwa kungo-kuratidza-kusimuka kwekufamba kweiyo Joy-Cons.
Zvikasadaro, yako hombe nyaya ichave iyo Shandura musoro kutenga kutanga. Zelda: kufema Wild ndeimwe yemitambo yedu yatinofarira-nguva dzese. Super Mario Odyssey pamwe ndiyo yakanyanya kunaka Mario mutambo wakamboitwa. Splatoon 2 zvinonaka. Kunyange Quirky mazita akaita seMSMS gadzira yakanaka yekutamba online. Kusakanganwa kudzokorora kwe Zelda: Link's Awakening.
32 akanakisa Nintendo Shandura mitambo munhu wese anofanirwa kuve neyake
Nepo mazita akadaro achidzosera kumhuri mutambo wevatambi, hazvisi zvese zvinongedzo cutesy. Shanduko iyi yakwezva vekutanga-bato vekugadzirisawo ivo, nekudaro vasinga shatise vanorema, vakavarairwa-mune-iyo-iyo-gamers gamers vari kuita. Mazita azvino akadai Doom uye Skyrim inoratidza kuzvipira kwaBethesda, nezvakawanda zvaizotevera kuuya. Uye isu tiri parizvino kushanda nzira yedu kudzokera kuburikidza The Witcher 3: Wild Hunt.
Chii chinonzi Nintendo chinja? UK nhau, zuva rekuburitsa, kuvhura mitambo uye zvimwe zvakaratidzwa